I-Chalet de l'Etang, entliziyweni yeValais - I-Airbnb
I-Chalet de l'Etang, entliziyweni yeValais
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguJean
Etang des Rochés eSavièse, entliziyweni yeValais
I-studio ethandekayo ye-1 okanye i-2 yabantu, ikhululekile kwaye iqeshwe kakuhle kumgangatho ophantsi we-chalet yethu, ngokungena ngokuzimeleyo, i-terrace encinci yamaplanga kunye nengca ngombono we-Etang des Rochés.
Isitudiyo sinegumbi elinemithi engaphelelanga (20 m²) elinendawo yekhitshi, iibhedi zokutsala ngaphandle (2 x 90/190) kunye negumbi lokuhlambela. I-terrace ejongene nempuma ilungele isidlo sakusasa kwilanga lasekuseni.
Ukuphosa A ilitye ukusuka Etang des Rochés apho amadada moorhens nesimbo apho trout Kulindelwe iinkcukacha babengabalobi ngeeCawa, le yokuhlala efanelekileyo ngokufanayo kubathandi imisebenzi ebusika, iiholide ski ezininzi ekubeni kufutshane (Anzère, Montana, Ovronnaz, Vercorin, Nax njl) kunabo bakhetha imisebenzi yasehlotyeni ngokuhamba ecaleni kweebhisi, uhambo oluphakathi okanye oluphakamileyo lweentaba, ukukhwela ibhayisekile ezintabeni okanye ukunyanga amanzi.
Kwigourmets kunye nabathandi bewayini ezilungileyo, iindawo zokutyela ezimbalwa ezilungileyo kunye neeseli ezininzi zikufuphi. Siya kukuvuyela ukukunceda.
Ukuhlala kwindawo, siyafumaneka kulo naluphi na ulwazi oluluncedo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Savièse